Kuwana Kugadzirisa uye Kudzosera Turu. Kuwana Gadzirisa Software.
DataNumen Access Repair ndiro yakanakisisa Tsvaga yekugadzirisa uye yekudzosa chishandiso pasi. Iyo inogona kugadzirisa yakashata Access .mdb uye .accdb dhatabhesi uye kudzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro ichideredza kurasikirwa mufaira uori.
4.90 / 5 (kubva 1,617 mavhoti)
Sei DataNumen Access Repair?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kweiyo Access kudzoreredza chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen Access Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen Access Repair inoputa kukwikwidza
Ndinokutendai nokuda kwekubatsira kwenyu.
Iko kunyorera kunoshanda zvakanaka. Nheyo yacho zvakare yakanaka.
Zvita 23, 2020
ndatenda. Chigadzirwa chakashanda nemazvo.
Muchokwadi ini ndakawana mhinduro yako mumaminetsi gumi ekutanga!
Zvisinei hazvo kunyangwe pakutanga ndaifunga kuti iyi yaive mari yakawanda yekushandisa pachirongwa chidiki,
Zvisinei hazvo kunyangwe pakutanga ndaifunga kuti iyi yaive mari yakawanda yekushandisa pachirongwa chidiki, DataNumen Access Repair takawanazve dhatabhesi redu saka izvozvi ndiri kufara kwazvo;)
Chero Chinhu Pamhepo
Wow your guys software is awesome I downloaded the trial software and it was able to show me all of the tables that I had in chaizvo. Iyi sofware
Wow your guys software is awesome I downloaded the trial software uye yakakwanisa kundiratidza matafura ese andaive nawo chaizvo. Iyi sofware matombo uye yakandibatsira zvakanyanya.
Kutenda nekudzoka kwandiri. Ini kubvira ndatenga iyo software uye ndikawana chinongedzo chekutora software ipapo ipapo. Ndakaiisa ikashanda
Kutenda nekudzoka kwandiri. Ini kubvira ndatenga iyo software uye ndikawana chinongedzo chekutora software ipapo ipapo. Ndakaiisa uye yakashanda zvine mutsindo!
Saved Bacon wangu! Ndatenda!
DataNumen Access Repair kupora yakawanda data kupfuura chero chimwe chigadzirwa chandakashandisa. Yakandibatsira kuchengetedza dhatabhesi dzakawanda dzakashatiswa. ndiri
DataNumen Access Repair kupora yakawanda data kupfuura chero chimwe chigadzirwa chandakashandisa. Yakandibatsira kuchengetedza dhatabhesi dzakawanda dzakashatiswa. Ndiri kufara kwazvo kuwana ichi chigadzirwa.
Costmira Inventory Zviwanikwa
chishandiso chako ndicho chakanakisa ini chandakakwanisa kugadzirisa faira rekuwana kuyunivhesiti kuti ndizvishandise uye ndinotenda
Richard Network maneja Fixsa
Zvita 30, 2018
Mhinduro Yekutevera Zvakajairika Zvikanganiso Nekuda kwe Kuwana Dhatabhesi Uori
Asingazivikanwe Dhatabhesi Fomati
Iyo dhatabhesi 'filename.mdb' inoda kugadziriswa kana isiri dhatabhesi faira.
Iyo Microsoft Jet database injini haina kuwana chinhu 'xxxx'.
Zvinyorwa (s) hazvigone kuverenga; hapana mvumo yekuverenga pane 'xxxx'.
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Access Repair v3.8
Tsigiro yekugadzirisa Microsoft Access 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 uye Access yeHofisi 365 dhatabhesi.
Tsigiro yekudzoreredza zvimiro uye zvinyorwa zvematafura muData rekuwana dhatabhesi.
Tsigiro yekudzosera MEMO uye OLE minda.
Tsigiro ku dzosera matafura akadzimwa uye zvinyorwa muKwaniswa dhatabhesi.
Tsigiro yekudzosera autonumber minda uye maindekisi.
Tsigiro yekudzosera hukama.
Kutsigira kudzoreredza mibvunzo.
Tsigiro yekudzosera password yakavharidzirwa Yekuwana dhatabhesi.
Kutsigira kugadzirisa Access mdb uye mafaera eacdb pane zvakashatiswa midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekutsvaga nekusarudza iyo Access mdb uye mafaera eacdb kuti agadziriswe pakombuta yemuno, zvinoenderana nemamwe maitiro.
Tsigiro yekugadzirisa batch yeAccess mdb uye accdb mafaera.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa mdb uye accdb faira nemenu yemamiriro eWindows Explorer zviri nyore.
kushandisa DataNumen Access Repair Kudzoreredza Rakaora Ruzivo Dhatabhesi
Kana ako Microsoft Access dhatabhesi (.mdb kana .accdb mafaera) akaora kana kukuvara uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen Access Repair kuti utarise mafaera uye udzore data kubva kwavari zvakanyanya sezvinobvira.
Ongorora: Usati wadzosera chero yakaora kana yakakuvara Access mdb / accdb faira ne DataNumen Access Repair, ndapota vhara Microsoft Access uye chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo mdb / accdb faira.
Sarudza yakaora kana yakakuvara Access mdb / accdb faira kuti igadziriswe:
Iwe unogona kuisa iyo mdb / accdb filename zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira.
By default, DataNumen Access Repair ichachengeta yakamisikidzwa Yekuwana dhatabhesi mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.mdb, uko xxxx izita renyaya mdb / accdb faira Semuenzaniso, yefaira Damaged.mdb, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira ichave Yakakuvadzwa_fixed.mdb. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Baya bhatani, uye DataNumen Access Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa iyo sosi mdb / accdb faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iyo sosi mdb / accdb dhatabhesi inogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura yakagadziriswa mdb / accdb dhatabhesi neMicrosoft Access kana zvimwe zvinoshandiswa.
DataNumen Access Repair 3.3 inoburitswa muna Zvita 10, 2020
DataNumen Access Repair 3.1 inoburitswa muna Gumiguru 31, 2020
DataNumen Access Repair 3.0 inoburitswa muna Chivabvu 27, 2020
Kuvandudza yekumhanyisa mhanyisa.
DataNumen Access Repair 2.9 inoburitswa munaNovember 18th, 2019
DataNumen Access Repair 2.8 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 5, 2019
DataNumen Access Repair 2.7 inoburitswa muna Kubvumbi 18, 2019
DataNumen Access Repair 2.6 inoburitswa muna Ndira 21, 2019
Tsigira Kutsvaga 2019.
DataNumen Access Repair 2.5 inoburitswa muna Gumiguru 22nd, 2018
Tsigiro Kuwanikwa kweHofisi 365.
DataNumen Access Repair 2.3 inoburitswa muna Kukadzi 11, 2018
Tsigira Kutsvaga 2016.
DataNumen Access Repair 2.2 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 10, 2013
Natsiridza kuenderana iko kunyorera neDAO uye Access.
DataNumen Access Repair 2.1 inoburitswa muna Chivabvu 15, 2009
Natsiridza kuenderana kweGUI pane akasiyana resolution uye anoshanda masisitimu.
DataNumen Access Repair 2.0 yakaburitswa muna Chikunguru 16, 2008
Nyorazve chikumbiro chose.
Tsigira Access 2007 dhatabhesi.
Tsigira Windows Vista.
DataNumen Access Repair 1.2 yakaburitswa muna Mbudzi 19, 2006
Vandudza injini yekugadzirisa.
Tsigiro yekutsvaga nekusarudza mafaera eMDC kuti agadziriswe pakombuta yemuno, zvinoenderana neimwe nzira yekutsvaga.
DataNumen Access Repair 1.1 inoburitswa muna Zvita 20, 2005
Tsigiro yekudzosera autonumber minda.
Tsigiro yekuwanazve indexes.
DataNumen Access Repair 1.0 inosunungurwa munaJune 18, 2004
Tsigiro yekugadzirisa Microsoft Access 95, 97, 2000, XP uye 2003 dhatabhesi.
Tsigiro yekudzoreredza chimiro uye marekodhi ematafura ari muAccess database.
Tsigiro yekudzosera matafura akadzimwa uye zvinyorwa muData rekuwana.
Kutsigira kugadzirisa Access mdb mafaera pane yakashatiswa midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch yeAccess mdb mafaera.
Tsigira kusangana pamwe neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa mdb faira nemenu yemamiriro eWindows Explorer zviri nyore.
Dzosera huwori Oracle DBF mafaira e database.
Gadzirisa yakaora dBase, FoxBase, FoxPro uye Visual FoxPro DBF mafaira.